Warshadda Qodista - Shiinaha Soo Saarayaal Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
WIK 9085 barta iibinta alaabada · Mashiinka caanka ah ee caanka ah wuxuu leeyahay awood xoog leh wuxuuna buuxiyaa shuruudaha howlgalka hufan. · Naqshadeynta saxda ah ee saxda ah iyo koontaroolka keydinta tamarta ee horumarsan ayaa mishiinka ka dhigaya isticmaalka shidaalka. · Isticmaalka taageereyaasha qaboojinta cusub iyo kuwa aamusnaanta waaweyn ayaa buuqa mashiinka ka dhigaya mid hooseeya; · Qaado tiknoolajiyad casri ah oo turbo-qaadis si kor loogu qaado la qabsiga mashiinka ee plateau; Daboolka faneel ee u gaarka ah jaangooyada ayaa si weyn u kordhiya qaadashada hawada ee ...
WIK 9070 Barta iibinta alaabada · Mashiinka caanka ah ee caanka ah wuxuu leeyahay awood xoog leh wuxuuna buuxiyaa shuruudaha hawlgalka hufan. · Naqshadeynta saxda ah ee saxda ah iyo koontaroolka keydinta tamarta ee horumarsan ayaa mishiinka ka dhigaya isticmaalka shidaalka. · Isticmaalka taageereyaasha qaboojinta cusub iyo kuwa aamusnaanta waaweyn ayaa buuqa mashiinka ka dhigaya mid hooseeya; · Qaado tiknoolajiyad casri ah oo turbo-qaadis si kor loogu qaado la qabsiga mashiinka ee plateau; Daboolka faneel ee u gaarka ah jaangooyada ayaa si weyn u kordhiya qaadashada hawada ee ...
WIK 9088 Qodobka iibinta alaabada · Mashiinka caanka ah ee caanka ah wuxuu leeyahay awood xoog leh wuxuuna buuxiyaa shuruudaha hawlgalka hufan. · Naqshadeynta saxda ah ee saxda ah iyo koontaroolka keydinta tamarta ee horumarsan ayaa mishiinka ka dhigaya isticmaalka shidaalka. · Isticmaalka taageereyaasha qaboojinta cusub iyo kuwa aamusnaanta waaweyn ayaa buuqa mashiinka ka dhigaya mid hooseeya; · Qaado tiknoolajiyad casri ah oo turbo-qaadis si kor loogu qaado la qabsiga mashiinka ee plateau; Daboolka faneel ee u gaarka ah jaangooyada ayaa si weyn u kordhiya qaadashada hawada ee ...